डा. केसी १७ दिनदेखि अनशनमा, आज पनि वार्ताको तयारी-Setoghar
डा. केसी १७ दिनदेखि अनशनमा, आज पनि वार्ताको तयारी
काठमाडौं । सरकार र अनशनरत डा. गोविन्द केसीका प्रतिनिधिबिच मंगलबार पनि वार्ताको तयारी छ । सोमबारको वार्ता निष्कर्ष बिहिन भएपछि फेरि वार्ता गर्ने तयारी भएको हो । मंगलबार वार्ता हुने सम्भावना भएपनि निश्चित भने नभएको केसीका सहयोगी डा. जीवन क्षेत्रीले बताए । त्रिविका उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँ र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमका डिन केपी सिंहलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने डा. केसीको माग पूरा गर्न नसकिने सरकारी टोलीले बताएपछि सोमबारको वार्ता निष्कर्ष बिहिन भएको थियो ।
वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्तिसँगै चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवा सम्बन्धी विभिन्न माग राख्दै डा. केसी १७ औं दिन पनि अनशनमा हुनुहुन्छ ।
यसैबिच डा. केसीको माग पूरा गर्न सकारात्मक रहेको सरकारले जनाएको छ । शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले अनशनमा रहेका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएकाले आफूहरु संवेदलनशील भएको बताए। केसीले भने जस्तै मेडिकल शिक्षामा सुधार आवश्यक भएकाले माग पूरा गर्न सकारात्मक भएको तर थप गृहकार्य गर्नु पर्ने उनले बताए ।
वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्न तयार भएको तर वरिष्ठताको परिभाषा स्पष्ट नहुँदा समस्या भएको शिक्षा सचिव श्रेष्ठले बताए । अहिले डिनमा नियुक्त भएका डा. केपी सिंहको राजिनामा भन्दा पनि सुधार प्रणालीको कार्ययोजना बनाई आगामी दिनमा लागु गर्ने पक्षमा सरकार छ ।